फ्रान्सलाई ३१ औं पटक हराउने बेल्जियमको दाउ ! विश्वकप सेमिफाइनल : बेल्जियम र फ्रान्स भिड्दै - Khasokhas Magazine
फ्रान्सलाई ३१ औं पटक हराउने बेल्जियमको दाउ ! विश्वकप सेमिफाइनल : बेल्जियम र फ्रान्स भिड्दै
पछिल्लो २४ खेलमा अपराजित टोली बेल्जियम रुसमा जारी विश्वकप फुटबलका सबै खेल जित्ने एक मात्र टोली हो। फ्रान्सले भने एक खेलमा बराबरी गरेको छ ।
विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया आमनेसामने हुनेछन्। इङ्ल्यान्डले क्वाटरफाइनलमा स्विडेनको चुनौती पन्छाउँदा क्रोएसियाले आयोजक रुसलाई हराँउदै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो।